ဖန်ခွက်ဖြတ်တောက်သောအခါအဘယ်အရာကိုအာရုံစိုက်သင့်သနည်း။ - Mibond စက်ပစ္စည်း
နေအိမ် / သတင်း / ဘလော့ / ဖန်ခွက်ဖြတ်တောက်သောအခါအဘယ်အရာကိုအာရုံစိုက်သင့်သနည်း။
views:100 Author:ဆိုက်ကို Editor ကို အချိန် Publish: 2021-09-06 မူလ:ဆိုက်ကို
5mm ၏အချင်း5မီလီမီတာရှိသောဖန်ပြွန်နှင့်လှံတံများကိုဖြတ်တောက်သောအခါ 10 မီလီမီတာကိုစားပွဲအစွန်းတွင်ပြားချပ်ချပ်ထားပါ။ Glass Tube ကိုဖြတ်တောက်ရန်နေရာ၌ဒေါင်လိုက်ဖိုင်အောက်ရှိတြိဂံဖိုင်၏အစွန်းကိုနှိပ်ပါ။ ဖိုင်အမှတ်အသားများသည် Tube fornufulference ၏ 1/3 သို့မဟုတ် 1/4 သို့ရောက်သောအခါဖန်ပြွန် (ကြိမ်လုံး) ကိုကောက်ယူပါ။ ဖိုင်အမှတ်အသား၏နောက်ကျောကိုဆန့်ကျင်လက်နှစ်ဖက်စလုံးကိုကိုင်ထားပါ, Glass Tube ပေါ်ရှိအခြားလက်ချောင်းများကိုနှိပ်ပါ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၎င်းကိုချိုးဖျက်ရန်အင်အားအနည်းငယ်ကိုတွန်းအားပေးပါ။ သို့မဟုတ်သင်အချို့ကိုသုံးနိုင်သည်Mini Rotary Toolတူသေးငယ်တဲ့ rotary မြင်။
1.File ဖြတ်တောက်ခြင်း - အထူရှိသောဖန်ပြွန်၏နှစ်ဖက်စလုံးကိုအလွှာသုံးခုအတွက် Scotch တိပ်နှင့်အတူထုပ်ပါ။ ဖြတ်ထားသော area ရိယာတလျှောက်အမှတ်အသားစက်ဝိုင်းတစ်ခုကိုဖိုင်တစ်ခုတင်ရန်ဖိုင်တစ်ခုကို အသုံးပြု. သင့်လက်ဖြင့်အထူရှိသောဖန်ပြွန်ကိုမချိုးမနိုင်မှီတိုင်အောင်၎င်းတို့ကိုပိုမိုနက်ရှိုင်းစေသည်။
2.first, ဖြတ်တောက်ထားသောနေရာကိုကောင်းမွန်သောသဲလွန်စတစ်လျှောက်ခုခံသံဝါယာကြိုးများဖြင့်ဝိုင်းရံထားသင့်ပြီးတော်လှန်ရေးဝါယာကြိုး၏လမ်းဆုံကိုအပူခံနိုင်ရည်ရှိရှိ insulaturing that နှင့်ခွဲထားသင့်သည် (သို့မဟုတ် 1mm-2mm ၏ချုပ်ရိုးအသေးငယ်သည့်ချုပ်ရိုးလေးခုချန်ထားပါ) ခုခံရေးဝါယာကြိုးကိုဗို့အားတင်းကျပ်စွာဖြင့်အလွန်နည်းသော voltage တွင်ထောက်ပံ့နိုင်သည်။ ခုခံရေးဝါယာကြိုးအနီရောင် - ပူကိုတစ်မိနစ်ခန့်ထားခဲ့ပါ, ဒဏ်ငွေအမှတ်အသားပြုသည့်ရေအေးစက်စက်စက်ချပြီးပါဝါကိုပိတ်ပါ။ ဖန်ပြွန်သည်ကောင်းမွန်သောလိုင်းတစ်လျှောက်တွင်အဆက်ဖြတ်မည်။
2.flat Glass ဖြတ်တောက်ခြင်း
1. ဖန်ခွက်ကိုဖြတ်တောက်ရန်ဖြတ်တောက်ထားသောအရွယ်အစားကိုဖြတ်တောက်ရန်ဖန်ခွက်ပေါ်တွင်မှတ်သားထားသင့်သည်။ ဖန်ခွက်ဖြတ်တောက်သောအခါ, သင်ကိုင်ထားသင့်ပါတယ်Rotary ဖြတ်တောက်ခြင်း tool ကိုလက်ျာလက်နှင့်သင်၏လက်ဝဲဘက်၌ရှိသောအုပ်စိုးသောမင်းကို၎င်း,
2။ ပြားချပ်ချပ်ဖန်၏အစွန်းကြိတ်ဆုံ။ ထုတ်လုပ်မှုတွင်အပြင်ဘက်ရှိဖန်ခွက်နှင့်အတူပြားချပ်ချပ်ဖန်ခွက် (3 မီလီမီတာအောက်ရှိဖန်ခွက်အထူ) ကိုလိုအပ်ပါကအထက်ဖော်ပြပါဖြတ်တောက်ခြင်းနည်းလမ်းကိုပထမ ဦး စွာဆွဲယူရန်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ထိန်းသိမ်းရန်မလိုအပ်သည့်အစိတ်အပိုင်းများကိုဖယ်ရှားပြီးရေစက္ကူများကိုသုံးပါပင့်ကူပစ္စည်းကိရိယာများကဲ့သို့သေးငယ်တဲ့ကြိတ်ကျောက်အစွန်းပတ်ပတ်လည်ကြိတ်ရန်။
1. ခုတ်ဖြတ်ရာအရပ်ကိုသုံးပါRotary Power Toolသို့မဟုတ်ဖိုင်အမှတ်အသားကိုခုတ်ရန်သံမဏိဖိုင်ငယ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး File Mark တွင်ပတ်0န်းကျင်အများအပြားပြုလုပ်ရန်ဝါဂွမ်းချည်ကိုသုံးပါ, ထို့နောက်အရက်ကိုချပါ, တစ်မိနစ်ခန့်တွင်ဝါဂွမ်းချည်ကိုလောင်ကျွမ်းစေပါ, ပုလင်းကိုဖိုင်အမှတ်အသားတစ်လျှောက်ဖြိုခွဲနိုင်သည်။
2။ ဖန်ခွက်ကိုဖြတ်ထားသောရေနံကိုဖြတ်သည့်အစွန်အဖျားအထိဖြည့်ပါ။ ထိုအခါအနီရောင်ပူသံလှံတံကိုဆီထဲသို့ထည့်ပါ။ ဖန်ခွက်ချိုးလိမ့်မယ်။
3အချို့သောRotary Toolsထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ဖန်ပုလင်းဖြတ်ရန်လက်ကျင်းပ Rotary Sawနှင့်Rotary Tool Cutter ။အကယ်. သင့်တွင်ဤကိရိယာများမရှိပါက၎င်းတို့ကို Wenzhou Mibond Mibond Machond Machondery Co. , Ltd. မှ0ယ်နိုင်သည်။ ဤကုမ္ပဏီသည်သာရောင်းချသည်Rotary Tools များ,ဒါပေမယ့်လည်းလျှပ်စစ်ကြိတ်စက်s ။
Mini Rotary Tool သေးငယ်တဲ့ rotary မြင် Rotary ဖြတ်တောက်ခြင်း tool ကို သေးငယ်တဲ့ကြိတ်ကျောက် Rotary Power Tool Rotary Tools လက်ကျင်းပ Rotary Saw Rotary Tool Cutter လျှပ်စစ်ကြိတ်စက် ပင့်ကူပစ္စည်းကိရိယာများ